Win Mobile World
Brand Choose BrandASUS Acer Apple Dell HP HUAWEI Lenovo MSI Microsoft Xiaomi
Display Size Choose Display Size14.0 Inches
RAM Choose RAM
Battery Choose Battery35 Watts (Min) thin Battery 40 Watt Hour Light Battery 40 watt-hour Battery 40W (Min) Battery 46W (Min) Battery 55 Watt Hours (min) Battery 60 Watt-Hour (min) Light and Thin Battery Built-in 41.4-watt-hour lithium-polymer battery Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery Built-in 50.3‑watt‑hour lithium‑polymer battery Built-in 54.5-watt-hour lithium-polymer battery Built-in 54‑watt‑hour lithium‑polymer battery Built-in 58.0-watt-hour lithium-polymer battery Built-in 58.2-watt-hour lithium-polymer battery Built-in 83.6-watt-hour lithium-polymer battery Built‑in 100‑watt‑hour lithium‑polymer battery Built‑in 58.2‑watt‑hour lithium‑polymer battery
Price Choose Price၁ သိန်းနှင့်အထက် (၁ သိန္းႏွင့္အထက္) ၂ သိန်းနှင့်အထက် (၂ သိန္းႏွင့္အထက္) ၃ သိန်းနှင့်အထက် (၃ သိန္းႏွင့္အထက္) ၄ သိန်းနှင့်အထက် (၄ သိန္းႏွင့္အထက္) ၅ သိန်းနှင့်အထက် (၅ သိန္းႏွင့္အထက္) ၆ သိန်းနှင့်အထက် (၆ သိန္းႏွင့္အထက္) ၇ သိန်းနှင့်အထက် (၇ သိန္းႏွင့္အထက္) ၈ သိန်းနှင့်အထက် (၈ သိန္းႏွင့္အထက္) ၉ သိန်းနှင့်အထက် (၉ သိန္းႏွင့္အထက္) ၁၀ သိန်းနှင့်အထက် (၁၀ သိန္းႏွင့္အထက္)
Release Date Choose Release DateJune, 2017 August, 2018 October, 2018 December, 2018 June, 2019 July, 2019 October, 2019 November, 2019 March, 2020 June, 2020
Show All Pc Laptops
Displaying products 199 - 207 of 214 in total
Mi NoteBook Ruby
MV992 - MacBook Pro 13-inch 8/256GB Silver (2019) 2,190,000 MMK
MV962 - MacBook Pro 13-inch 8/256GB Space Gray (2019) 2,590,000 MMK
MNED2 - iMac 27-inch Retina 5K (2018) 3,490,000 MMK
MNE92 - iMac 27-inch Retina 5K (2018) 2,850,000 MMK
MNEO2 - iMac 21.5-inch Retina 4K (2018) 2,090,000 MMK
MMQA2 - iMac 21.5-inch (2018) 1,790,000 MMK
MRR12 - iMac 27-inch Retina 5K (2019) 3,690,000 MMK
MRR02 - iMac 27-inch Retina 5K (2019) 3,350,000 MMK
MRT42 - iMac 21.5-inch Retina 4K (2019) 2,450,000 MMK
ထိုင်ရာမထ အိမ်ထဲမှာနေရင်း လိုချင်တာကို Delivery နဲ့မှာချင်တဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း Delivery Serivce လေး ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
WMW Hotline - 09 785 222 888 | 09 443 222 888 | 09 789 222 888 ကို ဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။
(သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့နယ်တွေကိုဆိုရင် ပိုဆောင်ခ အခမဲ့ (အခမဲ့) နဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေ့ချင်းအိမ်အရောက်ပို့ ဝန်ဆောင်မှုအား လက်ရှိရောဂါအခြေအနေများနှင့် Stay at Home ကြေညာချက်များအရ နေ့ချင်းအရောက်ပို့ဖြင့် ရရှိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပဲ ငွေလွှဲဝင်ပြီး နောက်ရက် (၇၂ နာရီအတွင်း) များမှသာ ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ပို့ဆောင်ခ (အခမဲ့) နဲ့ ပို့ပေးမယ့် မြို့နယ်တွေရယ် Terms & Conditions တွေရယ် အသေးစိတ်ကို ဒီလင့်ခ် - https://bit.ly/WMW_D2D မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Win Mobile World, best retail store for Smartphones, founded in 2012, April. We provide our customers with the best after sale services and reasonable price for latest multiple smartphones brands. The first store featured cheapest priced of smartphones and best repair service in Yangon.
No. 46/48(A) Shan Kone Street
© 2019-2020 Win Mobile World